Nezve P&M → Nyanzvi yekushongedza kwemakomputa • Wholesale
Zvakaitika zvakabatanidzwa nehunyanzvi
Iyo P & M yekusona chirimwa yakavambwa muna 1995 muRawa Mazowiecka. Kubva 2003. isu tinopa sewing, kucheka, ironing uye kunyora mazita. Isu tinopawo yakawanda yekushanda uye kushambadzira mbatya.
Isu tine yakakura, yemazuva ano uye yakarongedzwa mushini paki, mune mune:
Lockstitch michina ine yepasi kutakura - otomatiki michina
Lockstitch michina ine yakaderera uye yepamusoro yekufambisa ine hombe hombe - otomatiki michina
Flat maviri masingano
3, 4 uye 5 tambo dzakaputirwa
4-sindano uye gumi nemaviri-tsono rabara muchina pamwe mukana wekusona padiki
Matafura ekurongedza nemagetsi enjini
Kucheka tafura yemukamuri ne 8,5 m macheka, banga rakamira uye banga banga
Isu tine hanya nemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvedu
Imba yedu yekusona inova nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvatinogadzira zvakagadzirwa neyemhando yepamusoro machira ane zvakanaka zvinoshanda zvinoshanda uye yakanyanya kufaya dhayeti uye kupedzisa matekinoroji. Isu tinokwanisa kusangana nemakontrakta anonyanya kudiwa kuburikidza nekushandisa zvinobudirira kwemidziyo iripo isu. Tine ruzivo rwakakura mukusona, kucheka nekugadzira masimendi ekushambadzira uye mhando dzakakurumbira.
Mutengi anonyanya kukosha kwatiri
Vatengi vanoguta ndivo vanotikoshesa. Kurudziro yavo yakanaka inotikurudzira kugara tichigadzira uye nekuchengetedza mhando yepamusoro yemasevhisi edu.
Kushanda uye kushambadza zvipfeko
Tine huwandu hwakasiyana - zvinopfuura zviuru zvitanhatu zvezvigadzirwa, workwear i kushambadza kubva kune vagadziri vanozivikanwa pamitengo inoyevedza. Idzi ndidzo, pakati pevamwe, masweatshirt, makepisi, mavesti, mahembe, makushe, polo shati, t-shirts, mbatya dzebasa, nyanzvi, zvekurapa, chitoro chinotonhora uye zvipfeko zvefriji, uye shangu dzakasiyana siyana.
Computer embroidery / chipfeko chekupfeka
Screen kudhinda / prints pazvipfeko